Nudgify: Yandisa ukuGuqulwa kweShopify ngale Platifomu yoBungqina beNtlalo | Martech Zone
Inkampani yam, Highbridge, inceda inkampani yefashoni ukumilisela eyayo ngqo-kumthengi qhinga lwasekhaya. Kuba bayinkampani yemveli ebonelela abathengisi kuphela, bafuna iqabane elinokuthi libancede babe yingalo yabo yetekhnoloji kwaye ibancede kuyo yonke imiba yophuhliso lwabo lophawu, i-ecommerce, ukuhlawulwa kwentlawulo, ukuthengisa, ukuguqulwa, kunye neenkqubo zokufezekisa.
Kuba banemida ye-SKU kwaye abanalo uphawu olwaziwayo, sibatyhalele ukuba baqalise kwiqonga elalilungile, elinokutsha, kwaye lifuna utyalomali oluncinci kwisitaki esenziwe ngokwezifiso… sikhethe Shopify.
Kuba baqala eli shishini kwasekuqaleni, ukufumana ukuthembela kubakhenkethi bethu kuya kuba yinto ebaluleke kakhulu. Kunye nesicwangciso sobudlelwane boluntu, ukuthengisa ngokuzenzekelayo (nge klaviyo), inkonzo yabathengi eyomeleleyo, kunye nokuhanjiswa simahla… sifuna isalathiso kwindawo ye-ecommerce uqobo evumela iindwendwe ukuba ziyazi ukuba indawo iyathandwa kwaye iyasetyenziswa ziindwendwe zayo. Sasifuna i ubungqina boluntu Isisombululo esidityaniswa ngaphandle komthungo noShopify.
Buyintoni Ubungqina Bentlalo?
Ubungqina boluntu Yinto eyenzeka ekuhlaleni apho abantu bekopa iintshukumo zabanye ukuzama ukwenza isimilo kwimeko ethile. Ngamafutshane, ngabantu abenza oko bajonga abanye abantu bekwenza. Kukhuseleko ngamanani.
URobert Cialdini, Impembelelo, i-Psychology ye-Persuason
Ngeendawo ze-ecommerce, ndiye ndawubona umsebenzi wobungqina boluntu ngaphaya kweendwendwe nje ezikopisanayo. Ubungqina boluntu babonelela ngezinye iindlela zokuqhuba uguquko:
ithemba -Ukubona ukuba ezinye iindwendwe zibhrawuza kunye nokuthenga sisalathiso esomeleleyo sokuba uphawu, imveliso okanye indawo inokuthenjwa.
Ingxamiseko -Kwiisayithi ezinoluhlu olunomda, iindwendwe zikhuthazwa ukuba ziguqulwe kwangoko kunokulinda. Uloyiko lokulahleka (FOMOyindlela enamandla yokuguqula.
abantu Ngokunyusa iimveliso ezithengisa kakhulu, undwendwe olungenazigqibo luya kutyekela ngakumbi ekuthengeni ukuba luyabona ukuba abanye bayenzile.
Ivula - Ngaba unayo intengiso okanye isaphulelo esisebenzayo ngoku? Ukwenza ezi Nudges kunokuqhuba amaxabiso okuguqula kwizibonelelo ezithandwayo onazo.
Ukufunyanwa Nokuba undwendwe lwakho alulungelanga ukuthenga, unokutyhala iindwendwe ukuba zikhethe ukungena, iincwadana zeendaba, okanye imiyalezo ebhaliweyo.
Nudgify sele incede ngaphezulu kwewebhusayithi ezili-1,800 kumazwe angaphezu kwama-83 anyusa amazinga abo okuguqula- ngaphandle kwento ngaphandle kwedatha yexesha lokwenyani. Iimpawu zeqonga labo elibanzi zibandakanya:
Umsebenzi wangoku -Ukuphuma njani kutshintsho lwamva nje okanye ukubhaliswa kwangoko kunye nokwandisa ukuthembana
Ukutya kweDatha -Bonisa idatha yexesha lesitokhwe ngefidi ezenzekelayo
Ifom yokuZenzekelayo -Bonisa ngokuzenzekelayo ukubhalisa okutsha
Izikhokelo zeNudge -I-Nudges elungiselelwe kwangaphambili ye-e-Commerce, yokuHamba, i-SaaS kunye nokunye
Nudge Umakhi - Yenza iNudges entsha ngamagama akho kunye nemifanekiso
Bonisa iMigaqo -Thatha isigqibo sokuba ngawaphi amaphepha kunye nezixhobo iiNudges zakho ezinokuthi zivele
Useto lokuziphatha Cwangcisa i-trigger, ukulibaziseka kunye nexesha leNudges yakho ngokulungelelanisa izilayidi.
Yenza iinjongo Cwangcisa iphepha lakho lokuqinisekisa njengenjongo yokulandela ukuguqulwa okuncedisiweyo. Sebenzisa izibalo ezakhelwe-ngaphakathi ukuze ulungiselele kwaye ufumane ukuthengisa ngakumbi.
Izitayile zesiko Lungisa imixholo yakho ukuseta ithoni elungileyo
IiLwimi ze29 -Nudgify ixhasa ngokupheleleyo iilwimi ezingama-29 ezahlukeneyo
Tsala kwaye ulahle imijelo -Yila imilambo kwaye ubonise iiNudges zakho ngokulandelelana
Qhuba uhlalutyo -Thatha ukutyelelwa, unxibelelwano, kunye noncedo olunguqulweyo ukulinganisa imbuyekezo kubutyalo-mali kubungqina boluntu.
I-algorithm ye-Nudgify iyaqhubeka nokufunda ethi i-Nudge iguqule ngcono kwinqanaba ngalinye lohambo lwabathengi. Okukhona usebenzisa i-Nudgify ixesha elide, kokukhona kuya kubaluleka ngakumbi.
Qalisa ukuLinga kwakho kwaSimahla
Ukubhengezwa: Ndililungu le Nudgify, klaviyo, Shopify, kunye neAmazon kwaye basebenzise ezo linki kulo lonke eli nqaku.
tags: ukwesaba ukulahlekafomokonyusa amazinga okuguqulwayandisa utshintshokonyusa amaqondo okuguqula ezorhweboyandisa ukuguqulwa kwevenkileukukrokranudgifyPsychologypop yokuthengisaubungqina boluntuyintoni ubungqina boluntu